Maqaamka Falastiiniyiinta ee QM oo Kor Loo Qaaday
Golaha guud ee QM ayaa galabta cod aqlabiyad leh ku ogolaaday in kor loo qaado maqaamka maamulka Falastiin ay ku leeyihiin Qaramada Midoobay lagana dhigo dowlad goob-joog ah.
Ogolaanshahan ayaa timid kadib markii maanta madaxweynaha Falastiniyiinta Mohamud Cabaas uu shirka Golaha loo-dhan yahay ee QM u gudbiyay codsi uu ku dulabanayay in jagada Falastiin oo imika goob joog ah laga dhigo dowlad gob-joog ah.
Codkan ogolaanshaha waxaa ogolaaday 138 dowladdood, waxaa diiday 9 dowladood, halka ay ka aamuseen 41 dowladood.
Madaxweynaha Falastin Mr. Cabaas ayaa u sheegay shirka golaha ee maanta in cod u qaadidani ay tahay fursadii u danbeysay ee lagu bad-baadinayo xalka lagu helayo laba dowladood oo ay yeeshaan Isreal iyo Falastiin.
Talaabadan Falastiin kor loogu qaaday maqaamkeeda ayaa u ogolaanaysa inay ka mid noqdaan hay'addaha caalamiga ee QM sida maxkamadda danbiyada ee ICC, taasoo siin doonto inay danbiyo ku soo oogi karaan Israel.
Maraykanka iyo Isreal oo diiday go'aankan ayaa sheegay inay go'aankan uu carqalad uu ku yahay qorshaha nabadda ee Bariga Dhexe.
Falastiiniyiin badan oo ku sugan Ramalah iyo Marinka Gaza ayaa sameeyay dabaaldegyo ku aadan ogolaanshah Falastiin kor loogu qaaday jagadii ay ku lahaayeen Qaramada Midoobay.
Wabixinta iyo Falaqeyn arrintaas la xiriirta halka hoose ka dhagayso.
Warbixinta iyo Falanqeynta Codeynta QM